Wararka Maanta: Jimco, Mar 20, 2020-Ehelada dad lagu laayay duqayn ka dhacday Jannaale oo beeniyay war kasoo baxay taliska Africom
Balse, War saxaafadeed kasoo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay duqaynta oo ka dhacay meel u dhow Janaale, oo ah 60 kiiloomitir koonfur ka xigta Muqdisho, lagu dilay shan xubnood oo katirsan Alshababa. Waxaa kale oo lagu sheegay in aysan jirin waxyeello rayid ah.
Farxaan Maxamuud Maxamed, oo deggan Janaale oo khadka taleefanka kula hadlayay The Intercept, ayaa u sheegay in Maxamed oo 13 jir ah iyo Aabihiis Cabdi Farxaan Maxamuud ay kusii jeedeen dugsi uu wiilkiisu dhigto markii gantaal Mareykanku uu ku dhuftay bas ay la socdeen.
Nin kale oo isna saarnaa baska, oo ahaa 70-jir lagu magacaabo, Cabdiraxmaan Cali Waadhoor, ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka, sida uu sheegay wiilkiisa Cabdullaahi C / raxmaani Cali. “Aabahay waa nin naafo ah. Waligiis dhib uma geysan qof kale. ” ayuu yidhi Cali, oo ku nool London oo telefoonkiisa ku arkay sawirrada maydka aabihiis.
Guud ahaan dadka weerarkaas lagu dilay ayaa gaaraya illaa lix qof oo rayid ah, sida uu sheegay xildhibaan Mahad Dhoore oo katirsan barlamaanka koonfur galbeed.